स्वस्थ Archives - Sansar Dainik
सिस्नो स्वाद’का लागि मात्र नभई स्वा’स्थका लागि पनि उतिकै फा’इदा जनक मानिन्छ । सिस्नो प्रायः सबै ठाउँमा पा’इन्छ यसमा धेरै कि’सिमको प्रोटि हरु पाइन्छ् सिस्नो’मा फलाम आइरन , पोटा’सियम, क्याल्सियम, भिटामि’न ए, सी र डी जस्ता पौष्टिक तत्व प्रचुर मा’त्रामा पाइन्छ । यसमा रहेको औ’षधि गुण र प्रभाव’कारीका कार’ण पछिल्लो समय सहरी क्षेत्र, होटल र […]
पुरुषकै कारण हुन्छ महिलामा पा’ठेघरको क्या’न्सर
October 30, 2020 adminLeaveaComment on पुरुषकै कारण हुन्छ महिलामा पा’ठेघरको क्या’न्सर
क्या’न्सर कसरी लाग्छ र लागेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने बारे धेरैलाइ थाहा हुदैन् । अधिकांश अझै पनि क्या’न्सरबारे अनविज्ञ छन् । रोगबारे जानकारी नहुनु, अस्वस्थ्य खानपान र अव्यवस्थित जीवनशैलीका कारण नेपाल सहित विश्वभर अहिले क्या’न्सरका बिरामी बढ्दै गएका छन् ।” के हो पा’ठेघरको क्या’न्सर ? पा’ठेघरको मुखको क्या’न्सर, पा’ठेघरको मुखमा नियन्त्रण भन्दा बढी कोषीकाहरु वृद्धि भएपछि […]
October 29, 2020 adminLeaveaComment on यौ*नको पा;वर तुरुन्तै अ;त्यधिक मात्रामा बढाउने घरेलु औषधी
काठमाडौं । यौ*न दुर्बलताले धेरै मानिस पीडित छन् । यसको उपचारको लागि कतिपयले बजारमा पाइने बिभिन्न प्रकारका औषधी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता औषधीको प्रयोगबाट दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दछ । तनावपूर्ण जीवनशैली र अव्यवस्थित खानपानले से*क्स शक्तिमा ह्रास आइरहेको हुन्छ । यसको उपचारमा मानिसहरुले थुप्रै पैसा खर्च गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरुलाई से*क्स […]
यस्ता मानिसहरुले खाँदा ज्यान पनि जना सक्ने ! मेवाको सबैभन्दा बढि हानी हुने फल !
October 26, 2020 adminLeaveaComment on यस्ता मानिसहरुले खाँदा ज्यान पनि जना सक्ने ! मेवाको सबैभन्दा बढि हानी हुने फल !
मेवा सर्वत्र पाइने फल हो । यो प्राय: तराईमा पाउने गरिन्छ । यसमा म्याग्नेसियम, पोटासियम, नियासिन, प्रोटिन र क्यारोटिन तथा डायटरी फाइबर जस्ता शरीरलाई लाभ पुर्याउने तत्व पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा मेवाको सेवन हानिकारक पनि हुनसक्छ । सबै अवस्थामा भन्दा पनि कुनै समयमा मेवाको सेवन शरीरका लागि घातक हुन सक्छ । १. मेवाको सबैभन्दा बढि […]
October 19, 2020 adminLeaveaComment on कालो ओठ २ मिनेटमै हुनेछ गुलाबी,अपनाउनुहोस् बहुतै सजिलो यो घरेलु उपाय
काठमाडौँ । महिलाहरु सुन्दर देखिन बजारमा पाइने विभिन्न कस्मेटिक सामानको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। जस मध्ये लिपिस्टिक पनि एक हो।महिलाहरुले आफूलाई राम्रो देखाउन विभिन्न रंगका लिपिस्टिकहरु प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। तर आफूले सोचे जस्तो लिपिस्टिकको रंग ओठमा फरक देखिन्छ। जसका कारण कहिलेकाहीँ मनमा खिन्न लाग्छ। जसरी हामी अनुहारको स्याहार गछौं, त्यसरी नै ओठको पनि स्याहार गर्न जरुरी […]
October 19, 2020 adminLeaveaComment on अविवाहित युवतीमा दूध चुहिने ‘समस्या र समाधान’
केही समयअघि राजधानीको एक कलेजमा स्नातक तहमा अध्ययनरत २१ वर्षीया युवतीले कक्षामा पढिरहेको समयमा अनौठो अनुभूति गरिन् । अचानक छाति चिसो भएर आयो । तत्काल त्यति वास्ता गरिनन् । तर छाति भिज्ने क्रम बढ्दै थियो । घरमा आएर हेर्दा स्त’नबाट दूध चुहिएको थियो । सुरुमा अनौठो लागेपनि यसलाई उनले गम्भीर रुपमा लिइनन् । तर अविवाहित […]
October 18, 2020 adminLeaveaComment on आँखा चिलायो भन्दै अस्पताल पुगेका व्यक्तिको आँखामा जे भेटियो, डाक्टरनै परे चकित…
सामाजिक संजाल साथै अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यममा एक समाचार यति धेरै फैलियो की जसको कारण थाहा पाउँदा जो कोही हैरान हुनेछन् । प्राप्त जानकारी अनुसार त्यहाँ भएको के रहेछ भने । एक व्यक्ति आँखा बेस्सरी चिलाएपछि अस्पताल पुग्छन् । आँखा चेक गर्न पुगेका बिरामीको जब डाक्टरले चेक गर्छन् त्यहाँ सबै झस्किने अवस्था आउँछ ।आँखा चेक गर्दा […]
October 17, 2020 adminLeaveaComment on धेरै चिया पिउनुहुन्छ ? तपाईंका लागि खुसीको खबर छ…
के तपाईं पनि त्यस्तै एक व्यक्ति हो, जसलाई चिया नभइ हुँदैन ? अर्थात् चिया धेरै पिउने गर्नुहुन्छ ? प्रायजसो चिया धेरै पिउने मान्छेलाई सल्लाह दिने गरिन्छ कि धेरै चिया पियो भने बिमार भइन्छ, कम गर ! तर, यहाँ हामीले चिया पिउने व्यक्तिका लागि खुसीको समाचार लिएर आएका छौं । एक खोजका अनुसार धेरै चिया पिउने […]
October 16, 2020 adminLeaveaComment on प्याजले बढाउन्छ लामो समय यो’ न आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ? हेर्नुहोस् विज्ञको सुझाव
काठमाडौं । प्याजको सेवन गर्न तपाई कति रुचाउनु हुन्छ ? वा सेवनमा धेरै भएको त छैन् ? वा त्यसको बास्ना मन पर्दैन ? वा सेवन गर्न उचित मान्नु हुन्न ? तर प्याजका धेरै उपयुक्तता मध्य एक हो यौ’न क्षेत्रमा बृद्धि । प्याजले केवल खानालाई मात्र स्वादयुक्त बनाउँदैन प्याजको भोजन अपच तथा खाना नरुच्ने जस्ता समस्याको […]